Play 3 541
Umbhali: Massimo Taccoli, Paolo Zamparo, Aaron R. Swindle
Okwe FSX & P3D nguqulo chofoza lapha
Lokhu model is a rework okuphelele MB-339A original PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) ezikhishwe eminyakeni ethile edlule nge imodeli ethuthukisiwe ezibukwayo, futhi abanikeze asebenza nabo virtual. Le nguqulo entsha imodeli iqukethe yokwenza for isibonelo standard of "Frecce Tricolori", the Acrobatic wezempi team Italian. Sicela ufunde imiyalelo.
I Aermacchi MB-339 is a enezihlalo ezimbili Italian lezempi, yakhelwe 1970s ukuba esikhundleni MB-326. Echachambile iyalumela, it aba nempumelelo okuxubile ngokumelene mncintiswano bezindiza more yesimanje ezifana Bae Hawk. amakhophi Mayelana 200 yayakhiwe, futhi asetshenziswa emazweni ayisishiyagalolunye ehlukene.